Nri nri maka nri, Nri na-eri nri, Nri nri,
Nkọwa:Ngwakọta nri, Nhazi nri, Pịa udia nri, Kọmpat Press Feed Line akara, Usoro mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ ọla, Pịa akara stamping
Home > Ngwaahịa > Pịa Nri na Ngwunye Ngwá Ọrụ
Ngwaahịa nke Pịa Nri na Ngwunye Ngwá Ọrụ , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Ngwakọta nri , Nhazi nri suppliers / factory, wholesale high-quality products of Pịa udia nri R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Kọmpat coft feed line nke presses Kpọtụrụ ugbu a
Mpempe akwụkwọ ntinye akwụkwọ nke igwe mpempe akwụkwọ bụ usoro igwe eji eme ihe n’ebe niile iji mepụta akụkụ maka ọrụ dị iche iche, dịka stamping akpati, ihe elektrọniki na stamping na wdg.
N'ime ụlọ ọrụ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ metal, anyị kwenyere na Mayflay na-enye ụdị dị iche iche nke ihe mkpuchi igwe. Mkpakọ kọmpụta kọmpụta bụ otu ụdị. Understandghọta mgbagwoju anya nke otu ngwa ọ bụla na otu esi ahazi ya na azụmahịa gị ga - enyere gị aka ịhọrọ ụlọ ọrụ kwesịrị ekwesị iji nyere gị aka. Anyị nwere ike inyere gị aka ịchọta ngwa ọhụụ ma ọ bụ nke ewubere nke ọma iji rụọ ọrụ gị.
Zọ ntinye akwụkwọ nri na igwe njikwa ihe ngosi PLC bụ nke igwe igwe nri na - akpaghị aka nke na - enye ihe ndị dị ndụ na - eri ihe site na mgbe ọ na - aga n'ihu. igwe na-elezi ihe ma ọ bụ leveler. Na mkpokọta, ejiri otu akaghị tupu usoro ịmegharị ya ka enwere ike ịnweta ọnya na-egbu oge kwa nkeji na stamping.
A pịa ga egosiputa ihe n'ụzọ ziri ezi n'ime anwụ - n'ihu laa azụ, akụkụ na-akụkụ na Square ya na ngwá ọrụ. Tinyere nke a, ọ ga-enwerịrị ihe kwesịrị ekwesị iji mepụta ya na ngwá ọrụ ahụ. N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ ga-eji nwayọ edozi mkpịsị ọsịsị dere ma ọ bụ ndị ahụ chọrọ elu elu igwe mkpuchi dị mma iji gbochie ịkọcha ya.Usually, roba roba nke igwe kwụ ọtọ na igwe igwe nri na-ahọrọ ịka mma iji gbochie ịkọ ihu ..
A na-etinye ngwaọrụ ma ọ bụ nwụọ na-aga n'ihu na stamping press.Progressive die stamping mejupụtara ọtụtụ ebe ọrụ ọrụ, nke ọ bụla na-arụ otu ọrụ ma ọ bụ karịa na akụkụ. A na-eburu akụkụ ahụ site na ọdụ ruo ọdụ site na mpempe ngwaahịa ma bepụ na warara ahụ na arụmọrụ ikpeazụ.
N'ime ọtụtụ iri afọ gara aga, mgbanwe teknụzụ kachasị mkpa banyere etu esi ebipụta igwe nrụpụta akụkọ. Dị ka teknụzụ nri ndepụta na-aga n'ihu na-epelata, stampers na-achọpụta ụba ngwa nhazi nhazi, mgbanwe nhazi kachasị mma, nhazi dị mfe, mma na ntụkwasị obi ka ukwuu, yana ọtụtụ njedebe ndị ọzọ dị mma.
N'ime ihe karịrị afọ iri abụọ nke ahụmịhe na ezigbo ilekwasị anya na afọ ojuju ndị ahịa, ị nwere ike ịdabere na ụlọ ọrụ mayflay maka ọrụ ọzọ gị. Anyị na-enye ndozigharị ọkachamara na nrụnye ọkachamara na-elekwasị anya na afọ ojuju ndị ahịa. Soro onye ahịa na-arụ ọrụ ozugbo iji chọpụta ihe ụfọdụ gbasara mkpa ha. Ka obi sie gị ike, anyị nwere ngwaahịa dị mma iji zute ihe ịchọrọ.Big ma ọ bụ obere, akụ na ụba ma ọ bụ rụọ ọrụ nke ọma, nyocha ngwa ngwa ga-eme ka Mayflay chọta nke dabara adaba!
Ngwakọta nri Nhazi nri Pịa udia nri Kọmpat Press Feed Line akara Usoro mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ ọla Pịa akara stamping Ngwakọta usoro Ngwaọrụ nri